Sarimihetsika mihetsika 7 nentim-paharazana izay tsy azonao adino | Famoronana an-tserasera
Ny sarimihetsika malaza dia manana manintona izay fa ny famokarana 3D maro amerikana dia mahita fa sarotra kokoa ny mahita azy. Karazana majika sy halo izay manome azy ireo zavatra tena miavaka ary mandany lanja kanto bebe kokoa ny fotoana.
Manaraka izany, asehonay anao ny sary mihetsika fito izay manana a hatsarana lehibe amin'ny lafiny rehetra ary mampiseho tantara samihafa hitondrana antsika amin'ireo olo-malaza manintona izay mazàna manome heviny avo roa heny momba ny zava-dehibe amin'ny fiainana.
2 Ny hiran'ny ranomasina
3 Kirikou sy ilay mpamosavy
4 Ilay ilusionista
5 Ny tantaran'ny Princess Kaguya
6 Ilay planeta lozabe
7 Rehefa mitsoka ny rivotra
Fiaraha-miasa miaraka amin'ny Franco-Belgian momba ny fifandraisana eo amin'ny bera sy totozy tanora. Ny sary hosodoko vita amin'ny rano dia fanamboarana kanto ary toa miatrika boky tantara an-tsary ho an'ny ankizy isika.
Ireo mpilalao roa lehibe dia manana an'io sakafo matsiro izay mahasarika antsika amin'ny fifandraisan'izy ireo sy ny tantarany.
Ny hiran'ny ranomasina
Song of the Sea na Song of the Sea dia horonantsary sarimihetsika Irlandey narindra tamin'ny taona 2014, tarihin'i Tomm Moore, avy amin'ny The Secret of Kells. Tantara vaovao aingam-panahy avy amin'ny folklore irlandey izay mitantara ny tovolahy iray, Ben, sy ny zandriny vavy Saoirse, zazavavy afaka mivadika ho famehezana.
Sarimihetsika mihetsika izay izany fikasihan-tanana izany ary izany dia manana fivoarana lehibe amin'ny sarimiaina ireo mpilalao.
Kirikou sy ilay mpamosavy
Horonantsary mihetsika nentim-paharazana nentanim-panahy tamin'ity indray mitoraka ity avy amin'ny folklore afrikanina izay matetika zavatra tsy fahita firy ho an'ny karazana mpihaino tandrefana.
Ny sary mihetsika nentim-paharazana dia tena tsara tarehy ary ny feon-kira dia iray amin'ireo izay mahavita mampifandray mamirapiratra amin'ilay tantara tarihin'ny mpilalao tokana. Kirikou dia ny hany mpikambana ao amin'ny foko manana fahasahiana hiatrika ilay mpamosavy ratsy Karabá izy, ary tena fetsy ka teraka hatrany an-kibon-dreniny fotsiny izy.
Miorina amin'ny a script nataon'i Tati, genius hatsikana, sarimihetsika misy rivo-piainana milamina izay milaza ny tantaran'ny illusionista frantsay iray izay nandeha nankany Ekosy mba hitady asa ary mihaona amina tovolahy somary salama saina eny am-pandehanana.
Anisan'ireo andinindininy ny toetrany mahafinaritra ary ny mombamomba azy dia mahasarika mpihaino efa zokinjokiny kokoa noho ny feo melankolika izay tantaran'ny tantaran'i Tati. Azontsika atao ihany koa ny milaza fa toa taratasim-pitiavana ho an'ny tanànan'i Edinburgh izay aseho amin'ny fomba kanto amin'ity sarimihetsika nentim-paharazana ity.
Ny tantaran'ny Princess Kaguya
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, eo alohan'ny iray amin'ireo studio fanaovana sary mihetsika isika malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra, Studio Ghibli.
Ny tantaran'ny Princess Kaguya dia manomboka rehefa tantsaha zokiolona sasany mahita zazavavy kely izy ireo ao anaty zavamaniry volotsangana ary manapa-kevitra ny handray azy ho zanaka vavy.
Iray amin'ireo sarimihetsika tsara indrindra navoaka tamin'ny taon-dasa izay mitarika antsika amin'ny fiafarana mahafaty izay tsy maintsy hitan'ny Princess Kaguya ary miaraka amin'ny zava-kanto rehetra atolotry ny Studio Ghibli matetika ireo zavaboariny mahafinaritra amin'ny endrika sarimiaina. Tononkalo mihetsika amin'ny endriny madio indrindra.
Ilay planeta lozabe
Sarimihetsika frantsay animated sci-fi 1973 Notarihin'i René Laloux, iray amin'ireo kilasika fanaovana sary mihetsika Eoropeana izay tsy tokony hotadidinao.
Miaraka amina fomba fijery tsy mahazatra, dia aseho antsika a sarimihetsika tokana sy tena tsara tarehy misotro avy amin'izany ary hahazo aingam-panahy avy amin'ny iray. Kilasika eo amin'ireo kilasika.
Rehefa mitsoka ny rivotra
Raha manana mosara eo akaikinao ianao dia sintomy miaraka izao, satria mila azy ireo amin'ity sarimihetsika ity ianao sary mihetsika navoaka tao Great Britain tamin'ny Oktobra 1986 ary miorina amin'ny tantara an-tsary nataon'i Raymond Briggs.
Hibrida eo anelanelan'ny mety misy sary mihetsika mahazatra sy fijanonana izay nilazana ny tantara momba ny olona antitra roa izay miatrika ny fananganana toeram-pialofana nokleary ho an'ny fanafihana atsy ho atsy avy amin'ny Firaisana Sovietika. Mampiseho amintsika ny tantara amin'ny fomba fijerin'ny mpivady misotro ronono, izay tena ray aman-drenin'ny talen'ny horonantsary.
Sarimihetsika mihetsika fito amin'ny fomba nentim-paharazana izay indrindra ny mifanohitra amin'izay amin'izay ampianarina ao SIGGRAPH.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 7 sarimihetsika nentim-paharazana tsara tarehy, nefa tsy dia fantatra loatra, izay tokony ho hitanao